ကွန်ပျူတာအတွက် မလိုအပ်တဲဖိုင်ကိုရှင်းပစ်ပေးတဲ့ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ ။
လိုရင် ဒီမှာ သွားယူလိုက်ပါ အမျိုးကောင်းသား တင်ထားတာလေး ပြန်ဝေပေးပါတယ် ။
Gtalk မှာနောက်ခံပြောင်ပြီးသာလေး ကုဒ်လေတွေရေပြီနောက်ပြောင်လို့ ရတယ်နော် လိုချင်ရင် ဒီမှာ ဒေါင်းဗျာ ။
ဘော်ဘော် တောင်ကြီးသားလေး ပေးထားတာ အဆင်ပြေပါစေး တောင်ပေါ်သားလေး...
လုပ်နည်းကတော့ သိပြီးသာသူတွေကတော့ သိနေပြီ မသိသေးတဲ့ သူတွေ ကျွန်တော်ပြောမယ်နော့ ကျွန်တော်
ဆော့ဝဲအရင်ယူလိုက်ဗျာ ယူပြီးသာဆော့ဝဲကို ရမ်းလိုက် ပြီရင် ဂျီတော့ဖွင့်ထားရင် ဂျီတော့ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ဗျာ
ပြီရင် ဂျီတော့ကိုပြန်ဖွင့်လိုက် ကျွန်တော်ပြောသလိုလေး ကလစ်သွားလိုက်...
►Chat theme အောက်က ဘောက်လေးဘေးနားကများလေးဆွဲချလိုက်
►အက်မှာ gtalk smile theme v3.0 by nitin ကိုရွေးပေလိုက် ပြီရင် OK ပေါ့ဗျာ ပြီပါပြီ။
:) ကုဒ်တွေ ဘယ်လိုရိုက်ထည့်ရမလည်းမမေးနဲ့ နော် rar ဖိုင်ထဲ ရှိပြီသား ကြည့်ပြီးသာရိုက်ထည့်ပေတော့ ။
Formatfactory 2.70 လေးပါ ။
လုပ်နည်းက လွယ်ပါတယ် ဆော့ဝဲ ယူပြီရမ်းလိုက် အိုင်ကွန်ထွက်လာလိုက်မယ် အိုင်ကွန်ကိုကလစ်ပြီ ဆော့ဝဲဖွင့်လိုက်ပေါ့ဗျာ။
ဘယ်ဘက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ Video ပြောင်မှာလား Audio လား ပြောင်းချင်တာကိုကလစ်လိုက်။
(Video ကို MP4 ပြောင်းမယ်ဗျာ )
Video ကို ကလစ်ပြီ all to Mp4 ကို ကလစ်လိုက် ။
ဖိုင်တစ်ခု ထွက်လာလိုက်မယ် အက်မှာ ညာဘက်အပေါ်မှာ Add File ကို ကလစ်လိုက်။
ပြောင်းမယ့် video ကို ယူပြီ open လိုက် ပြီရင် ok မူလဖိုင်ပြန်ရောက်သွားလိုက်မယ် ။
ဖိုင်ရက်အပေါ်မှာ အနီရောင်လေးနဲ့start ကိုကလစ်လိုက် ပြီသွားရင် ff output မှာပြောင်းလိုက်တဲ Video ကို သွားယူပေါ့ဗျာ ။
ဒါပါပဲ Audio ပြောင်လည်း အက်တိုင်းပါပဲ ကျန်တာတော့ ကို့ ဘာသာကလိပေါ့ဗျာ။
လိုရင် ဒီမှာ ဗျို့ အလားကား ဟုတ်ဘူး 5ကျပ် နော် :P
အဆင်ပြေပါစေဗျာ တောင်ပေါ်သားလေး ....
Any Converter Professional.
Video Converter ဆော့ဝဲလေးပါ ။ဒီဆော့ဝဲလေးအကြောင်းမပြောခင် သူ့ ရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးကို အရင်ပြောပြပါမယ် ။
Video File တွေကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အပိုင်းတစ်ခုတည်းကို ရွေးပြီး ဖြတ်ယူလို့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး Video File ကနေ Mp3 , Wave ,
Swf, Flv, mpeg, mp4 , .. etc အများကြီးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး အသုံးပြုပုံနဲ့ Crack ထည့်ပုံကို ပြောပြပါ့မယ်။
အရင်ဆုံးဆော့ဝဲကို ဒေါင်းလော့ချပါ။ ပြီးရင် အထဲမှာ ပါတဲ့ any-video-converter ဆိုတာလေးကိုရမ်းလိုက်ပါ။
အားလုံးပြီးသွားရင် အောက်ကပုံစံအတိုင်း မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
အဲလိုပေါ်လာပြီးရင် ဆော့ဝဲ ရမ်းတာ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ ။ဒီအတိုင်းသုံးလို့လဲရပါတယ် ။ဒါပေမယ့် သုံးမိနစ်ပဲ free ပေးသုံးပါတယ် ။
သုံးမိနစ်ထက် ကျော်လာတဲ့ video ဖိုင် မှန်သမျှကို ဖြတ်ချပစ်ပါတယ် ။ အဲဒါကြောင့် အပြည့်အဝ အသုံးပြုနိုင်အောင်လို့ Crack ဖိုင်လေးကို ရမ်းပေးရပါတယ် ။
Crack.exe ကို ဘယ်လို ထည့်မလဲဆိုတာ ပြောပါမယ် ။ အရင်ဆုံးခုဏ ဆော့ဝဲရမ်းပြီးလို့ အပေါ်ကလို ပေါ်လာတဲ့ ပုံကိုပိတ်လိုက်ပါ။
ဒေါင်းလော့ချတဲ့အထဲမှာ Crack.exe ဆိုတာ ပါ ပါတယ် ။အဲဒီတစ်ဖိုင်လုံးကို Copy ကူးလိုက်ပါ ပြီးရင်
Program C >
Any Video Converter Professional အထိ ရောက်အောင်သွားပါ။ အဲဒီအထဲမှာ ခုဏ Copy ကူးလာတဲ့ Crack .exe ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို Paste လုပ်ပါ။
ပြီးသွားရင် အဲဒီ paste လုပ်တဲ့ ဖိုင်ကိုပဲ ထပ်ဖွင့်ပါ။ အထဲမှာ VideoConvPro ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေး တစ်ခုတည်း တွေ့ပါလိမ့်မယ် အဲဒီဖိုင်ကို Copy လုပ်လိုက်ပါအုံး
ပီးရင် ခုဏ Crack.exe ဖိုင်လေးကို paste လုပ်တဲ့ နေရာမှာပဲpaste လုပ်ပါ ။အဲဒိအချိန်ကျရင် box တစ်ခုတက်လာပါလိမ့်မယ် ။
အဲဒီ အထဲမှာ Copy and Replace ဆိုတာကို ရွေးပေးလိုက်ပါ ။အဲဒါဆိုရင် Crack ထည့်တဲ့ အပိုင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီ ။
Software ကို စပြီးအသုံးပြုလို့ရပါပြီ ။ တစ်ခုသတိပေးချင်တာက ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ Video File ကို မြန်မာလို နာမည်ပေးထားလို့မရပါဘူး ။
အရှင်းဆုံးဖြစ်သွားအောင် ပြောင်းချင်တဲ့ ဖိုင်ကို Desktop ပေါ်ကိုအရင်တင်လိုက်ပါ ပြီးတော့မှ ကျန်တာတွေကို ဆက်လုပ်ပါ အဲဒါဆို ရင် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် ။
ဆော့ဝဲအသုံးပြုပုံကို ပြောပြပါမယ်။ အောက်ကပုံလေးကို ကြည့်ပါ Add Video ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ် ပြောင်းချင်တဲ့ video ဖိုင်ကိုရွေးပေးပါ။
ဒုတိယအဆင့်က ညာဘက်က Profile ဆိုတဲ့ ဘေးက မြှားလေးမှာ ကိုယ် ပြောင်းချင်တဲ့ File type ကိုရွေးပေးပါ ။
ပြီးတာနဲ့ Convert ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပေးပါ ။ 100% ပြီးလို့ Complete ဖြစ်သွားရင် အားလုံးပြီးသွားပါပြီ။
ပြောင်းပြီးတဲ့ ဟာကို File >>>> Out Put Folder ကနေ ရယူနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက video ကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာလေးကိုပဲ ဖြတ်ယူတာပါ ။အဲဒါကလဲ ခုဏအတိုင်းပဲ အရင်ဆုံး ဖြတ်ချင်တဲ့ ဖိုင်ကို ထည့်လိုက်ပါ
ပီးတာနဲ့ ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ file type ကိုပြောင်းလိုက်ပါ ပြီးရင် အောက်မှာပြထားတဲ့ အကွက်လေးထဲက play ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
ကိုယ်စဖြတ်ချင်တဲ့ နေရာမှာ တွန့်ကွင်းအစ လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ လိုချင်တဲ့အပိုင်းရတာနဲ့ တွန့်ကွင်းပိတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပီးတာနဲ့ convert ကိုနှိပ်ပြီးတော့ လိုချင်တဲ့အပိုင်ကို ရနိုင်ပါပြီ ။
လိုချင်ရင် ဒီမှာ ဒေါင်းသွားဗျာ မြောင်းမြ ဖိုရမ် မှ ကိုဗညားအောင် တင်ထားတာလေး ကော်ကော် ပြန်လုပ်ထား ပေးတာပါ ။
အဆင်ပြေပါစေ တောင်ပေါ်သားလေး ။
ကို့ စက်မှာ Screen Saver ကို ပုံအရှင်နဲ့ ထားချင်ရင် လန်းတယ်နော် လိုအပ်သူများ ဒီတွင် ဒေါင်းပါ ။
ကိုညီနေမင်း ဆိုဒ်ကပဲပြန်မျှဝေပေးတာပါ အဆင်ပြေပါစေ တောင်ပေါ်သားလေး...
ဒီ software လေးကိုမယူဖြစ်လိုက်ရင်နောင်တရနိူင်တယ်နော် ....
ကိုယ်ကွန်ပျူတာမှာရှီတဲ့ icon လေးတွေကိုလှုပ်မလား....
ယူကြနော် လိုချင် ဒေါင်း သွား ဗျာ အဆင်ပြေပါစေ တောင်ပေါ်သားလေး ...
မေ့နေတာ keygen ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ် . keygen ကို မသုံးတတ်ရင် ပြောပါဦးမယ် . ..
မိမိနာမည်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး generate ကို နှိပ်လိုက်ပါ registration code တစ်နည်းအားဖြင့် serial number ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ။
အောက်က ပြောပြတဲ့အထဲမှာ ထည့်ရမှာပါ။
နာရီပုံစံနားတွေဘာတွေရှိတဲ့ taskbar ညာဖက်အခြမ်းမှာ Desktop icon toy icon လေး ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်.
သူ့ကို right click ထောက်လိုက်ပြီး option ကို ၀င်လိုက်ပါ။
ပြီးလျှင် register info နာရီပုံစံနားတွေဘာတွေရှိတဲ့ taskbar ညာဖက်အခြမ်းမှာ Desktop icon toy icon လေး ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
အပေါ်မှာ keygen ကနေ ယူထားတဲ့ user name နဲ့ serial number ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Ok ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ကိုညီနေမင်း တင်ပေးထားတာလေးပြန်ဝေပေးပါတယ် ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ ။
အင်တာနက် Connection နှေးကွေးနေလဲ မိမိတို့ရဲ့ အချစ်တော်ကြီး စွမ်းအားရှင် IDM ကတော့ စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အခုဆို Version 6.01 တောင် ဖြစ်လာပါပြီ။ သုံးစွဲဖူးသူတိုင်း သိမှာပါ။ မည်သူမှ လက်မလွှတ်နိုင်ပါဘူး။ ဘလော့တိုင်းမှာ ဖော်ပြနေပေမယ့် မိမိအတွက် မှတ်တမ်းအနေနဲ့ ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်သူများ ဒီတွင်Downloadလုပ်ယူပါ။
ကောင်းလို့ကိုစေတနာတင်ထားတဲ့ အတိုင်းလေပြန်မျှပေးလိုက်တယ်နော် ပျော်ရွှင်ပါစေ တောင်ပေါ်သားလေး ။
ဓါတ်ပုံတွေကို နောက်ခံသီချင်းနဲ့လုပ်မယ် မြန်မာလိုစာတမ်းထိုးပြီ DVD Slide Show လုပ်ဖို့WOUNDERSHARE DVD လေးပါ။
လိုချင်ရင် ဒီမှာ ဒေါင်းသွားပါ ယူပြီ ရမ်းလိုက်ပါနော် Licensed e-mail နဲ့Registration Coad ကိုပါထဲ့ထားပေးတယ် Register လုပ်လိုက်ပေါ့ဗျာ။ မြန်မာအိုင်တီကနေယူထားတာပါ ယူထားတာကြာနေပြီလေ မူရင်ရေးသာသူကိုမေ့သွားလို ဖေါ်မပြပေးနိုင်တာခွင့်လွတ်ပါဗျာ.... အဆင်ပြေပါစေ တောင်ပေါ်သားလေး။
Picasa 3.6 သုံးဝင်မှု
ကိုစေတနား အိမ်ကမလာတာပါအဟိ ပြန်မျှပေးလိုက်တယ်နော် ကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်ဗျ ဘယ်ရောက်နေမှမသိတဲ့ 
ပုံတွေလဲ ဒါလေးဖွင်လိုက်ရင်ပြန်ပေါ်လာတယ်လေး ။